Sprinter nivadika teny amin’ny RN7: maty tsy tra-drano ireo mpandeha roa teo aloha | NewsMada
Sprinter nivadika teny amin’ny RN7: maty tsy tra-drano ireo mpandeha roa teo aloha
Nampy ny ainy teo noho eo ireo mpandeha roa, nipetrakanifanila tamin’ny mpamily. Mpandeha fito hafa kosa naratra mafy, vokatry ny loza nateraky ny taksiborosy iray tany amin’ny lalam-pirenena fahafito ny sabotsy teo. Fandehanana mafy, harerahana no nahatonga ny loza…
Taksiborosy ao amin’ny Trans Tsy Tara avy aty Antananarivo ho any Ihosy, niharan-doza teny amin’ny lalam-pirenena fahafito, teo amin’ny PK 315+50, fokontany Ambohimpihaonantsoa Camp Robin, ny sabotsy teo, tokony ho tamin’ny 6 ora sy 20 minitra. Olona roa maty tamin’izany, ary fito hafa naratra mafy. Ny telo tamin’ireo nalefa any amin’ny hopitaly Fianarantsoa, ary ny roa nalefa aty Antananarivo. Araka ny fanazavana avy amin’ny zandary, tao anaty fiolahana ity fiara ity no nidona tamin’ny vodivato ary nivadika tany amin’ny sisin-dalana havanana. Vokany, maty teo no ho eo ny mpandeha teo aloha, vehivavy iray 66 taona sy lehilahy 45 taona.
Raha ny filazan’ny olona ihany, nandeha mafy ilay fiara io, ihazo any Ihosy. Tsy nahatana familiana ka izao niharan-doza izao. Mety vokatry ny harerahan’ny mpamily no nahatonga izany, raha ny nambaran’ny olona ihany. Nanao ny asa famonjena ny olona teny an-toerana. Tonga ihany koa ny zandary nanao fizahana ny fahavoazana. Mandray an-tanana ny raharaha avy hatrany ny zandary.
Maromaro ny loza tamin’ny RN7
Ny herinandro teo, maromaro ny lozam-pifamoivoizana nitranga tamin’iny lalam-pirenena fahafito iny. Anisan’izany ny taksiborosy Sprinter iray nivadika alohan’ny hidirana an’Andranomanelatra. Kamiao roa ihany koa teo anelanelan’Ambatolampy sy Antsirabe. Samy potika avokoa ireo ary naharatrana olona.
Anisan’ny mety mahatonga ny loza ny lalana malama noho ny orana mirotsaka matetika tato ho ato tamin’ny faritra mianatsimo iny. Eo ihany koa ny fandehanana mafy ataon’ireo fiara entin’ny fahatokisana fa za-dalana sns. Manampy trotraka ny tsy fisian’ny mpitandro filaminana manakana fiara eny amin’ny lalam-pirenena fa misy ihany ny fanaovana izay danin’ny kibony ho an’ny mpampiasa fiara. Mitera-doza anefa izany…